Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in shirkadda DP World ay dalka ka difaaci doonto | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in shirkadda DP World ay dalka ka difaaci...
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in shirkadda DP World ay dalka ka difaaci doonto
Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in shirkadda DP-world ee Imaaraadka laga leeyahay ay kusoo xadgudubtay Soomaaliya, islamarkaana ay ka waddo maalgashi aan shuruucda dalka waafaqsaneyn.
Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad
Wasiirka waxaa uu tilmaamay in shirkadda DP World ay khatar gelisay dhulka Soomaaliya, islamarkaana ay la wareegtay dekeddaha Berbera iyo Boosaaso.
Waxaa uu xusay in la jooggo xilligii dowlada Soomaaliya ay dalka ka difaaci la aheyd Shirkadda.
“Shirkadda DP-world way na xumaysay, waxayna khatar gelisay midnimada dalkeenna, welina ma joojin faragelinteedii, waan sabirnay, sabirkuna xad ayuu leeyahay; waxaan diyaar u nahay in aan ka difaacno dalkeenna, si lamid ah cidkasta”ayuu yiri Wasiir Cawad oo la hadlayay Telefishinka Al-Carabiya.
Shirkadda DP World ayaa gacanta ku heysa dekeddaha Berbera iyo sidoo kale Boosaaso ka dib markii heshiis hoosaad ay la gaartay Somaliland iyo Puntland, waxaa sidoo kale xusid mudan in Shirkadaasi horay looga soo ceyriyay dalka Jabuuti.